Duqeyn Lagu Fuliyay Gobalka Baay oo DFS War Kasoo Saartay - Awdinle Online
Duqeyn Lagu Fuliyay Gobalka Baay oo DFS War Kasoo Saartay
4 April, 2020 (Awdinle Online) –Ciidanka Xoogga dalka iyo kuwa Taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaano AFRICOM ayaa duqeyn diyaaradeed ka fuliyay deegaan ka tirsan Gobolka Baay ee Maamulka Koonfur Galbeed.
War qoraal ah oo kasoo baxay dowladda Federaalka ayaa waxaa lagu sheegay in duqeynta ay ka dhacday deegaan lagu magacaabo Xawaal Barbaar oo ka tirsan Gobolka Baay, isla markaana lala eegtay xubno ka tirsan Al-shabaab.
Sidoo kale Qoraalka dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in duqeynta lagu dilay 5 kamid ah dagaalamayaasha Al-shabaab kuna sugnaa Xawaal Barbaar, iyadoona duqeyntaas ay iska kaashadeen Ciidanka dowladda iyo kuwa AFRICOM.
Dowladda Soomaaliya ayaa tilmaamtay in howlgalka duqeynta ee la fuliyay wax Khasaaro ah uusan kasoo gaarin dadkii shacabka ahaa ee ka Agdhawaa deegaanka, kadib markii ay qiimeyn sameeyeen.
Si kastaba tiro ka dhowr jeer ayaa diyaarado laga leeyahay Mareykanka oo garab ka helaya Ciidanka dowladda Federaalka waxaa ay duqeymo dhowr ah ka fuliyeen deegaano ka tirsan Gobolada Jubbooyinka iyo Shabeellaha Hoose.
Previous articleNin lasoo shaqeeyay Ururkii Dhallinyarada SYL. Oo Maanta Coronavirus Ugu Geeriyooday London
Next articleIsku shaandhayn lagu sameeyay talisyada booliska dowlad goboleedka puntlan